भाग्यशाली ट्री | स्लट Fruity £5+ £ 500 मुफ्त! भाग्यशाली ट्री | स्लट Fruity £5+ £ 500 मुफ्त!
भाग्यशाली ट्री एक mobile free spins bonus खेल एक चिनियाँ कहानी देखि सुनको रूखको विषय आधारित. त्यहाँ पाँच रील र विभिन्न विजेता संयोजन संग तीस ठूलो paylines छन्. खेल पृष्ठभूमिमा एक निर्मल पोखरी संग एक सुन्दर गुलाबी विषय छ, जादुई पहाड र धनी ठोस सुन रूख. रूख केवल सुन्दर पात र फूल तर सुनको सिक्का साथै बढ्छ. पृष्ठभूमिमा मा स्पा विधा संगीत मन धेरै मानिसलाई निको पार्छ. त्यहाँ यो खेल धेरै सजिलो विजेता बनाउन धेरै बोनस सुविधाहरू छन्. यो सट्टेबाजी 30p रूपमा कम संग शुरू हुन्छ र £ 90 को एक अधिकतम सम्म जान्छ. यो भन्दा खेलाडीहरू आदर्श छ कि तल्लो सीमा खेल छ.
भाग्यशाली ट्री को विकासकर्ताको बारेमा
यी अद्भुत निःशुल्क spins तपाईं साइट के जीत राख्न खेल वैज्ञानिक खेल विकास भएको थियो. जुवा उद्योग मा समृद्ध अनुभव को आफ्नो चालीस वर्ष आफ्नो खेल गुणस्तर मा स्पष्ट प्रतिबिम्ब छ. र आफ्नो खेल को सबै भन्दा आधुनिक मोबाइल उपकरणहरूमा नाटक हो.
यो विजेता मा सुन्दर एनिमेसन प्रभाव संग रंगीन प्रतीक धेरै संग धेरै नेत्रहीन आकर्षक खेल हो. आधार प्रतीक एक फेंग शुई भ्यागुतो हो, एक प्राणी जस्तै कछुवा, एउटा माछा, बोनसाई बोट, गुलाबी र सेतो लिली. एक गर्न जे प्ले कार्ड देखि तल्लो मूल्य प्रतीक हो. यो माथि तिर्ने प्रतीक निःशुल्क spins तपाईं साइट के जीत राख्न खेल दिन्छिन् कि भ्यागुतो छ 900 यसको उपस्थिति पाँच मा सिक्का. यो खेल मा छ फरक बोनस प्रतीक हो र के यो खेल धेरै अद्वितीय बनाउँछ छ. निःशुल्क spins समयमा, तपाईं मात्र यी प्रतीक चार प्राप्त हुनेछ.
जंगली प्रतिक: को ड्रागन र सुन सिक्का प्राथमिक जंगली प्रतीक हुन् र तिनीहरूले पनि खम्बा जीत दिन. एक payline मा पाँच ड्रेगन संग, तपाईं पनि जित्न सक्छौं 2000 पटक आफ्नो खम्बा. ड्रागन सबै आधार प्रतीक लागि विकल्प. सिक्का को spins समयमा देखिदैन तर माथि सुनको रूख देखि पतन. सिक्का को कुनै पनि नम्बर फस्न सक्छन् र तिनीहरूले पनि सबै आधार प्रतीक लागि विकल्प.
स्क्याटर विशेषता: को यिन yangs यो स्क्याटर प्रतीक रूपमा साथै दुवै जंगली हो निःशुल्क spins तपाईं साइट के जीत राख्न खेल. यी रील चार दुई र तिनीहरूलाई तीन ट्रिगरहरू मा अनलाइन देखा 10 मुक्त spins.
सारांश: यो छ निःशुल्क spins तपाईं साइट के जीत राख्न बोनस सुविधाहरू उच्चतम नम्बर खेल. तिनीहरूले तपाईंलाई विभिन्न संयोजन देखि धेरै बारम्बार WINS बनाउन मदत.
फूल (Replaces Xmas edition)